8-Maarso oo si Weyn Looga Xusay Madasha Shirka
Xaflad balaaran oo lagu maamusayey maalinta haweenka Adduunka ,Gaar ahan haweenka Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtey madasha shirka nabada Soomaalida uu haatan ka socdo ee Mbagathi, Kenya.
Xafladaasi ayaa ugu horey ka hadashey Marwo Caasho axmed Cabdalla oo ka hadasjhaey tariikh haweenka Soomaaliyeed iyo marxaladihii kala duwaa ay soo mareen.
Faadumo Cali Cigaal ayaa iyana ka hadashey qaabka gudniinka iyo taariikhda gudniinka soomaalida,waxay kaloo sheegtey in gudniinka soomaalida uga yimid wadanka Masar.
Paul Sinkins oo ka socdey midawga yurub ayaa sheegay in ay harumariyen barnaamijyada harumarinta haweenka Soomaalida 2-sanao ugu danbeysay waxa kaloo uu sheegay in haweenka soomaalida loogu talagaley dhaqaale gooni ah oo ka duwan haweenka ku nool wadamada kale ee afrika.
ygy danbey waxaa halkasi ka hadley Amnasator Winistons A.Tubman oo ah wakiilka Xoghayaha guud ee qaramada Midoowey oo sheegay in shirkii golaha amaanka looga hadley arrimha Nabdeynat Soomaalida ,waxaa kaloo uu sheegy in qaramada midoobey ka go`an tahay in shirka nabada Soomalida laga hello dawlad ,waxaa kaloo taageeray heshiiskii 29- Janaayo.04 hogaamiyayaasha Soomaalida ku gaareen Guriga Madaxtooyada dalka kenya ee Nairobi.
ugu danbeyn waxa uu sheegay in ay qwaramada midoobey qaadi doono talaabo deg deg ah oo ay shacabka soomaalida ku farxi doonaan madaama dawlad la`aan ku soo jireen 15-sanno.
xafladaasi waxaa shahaado sharaf lagu guddoonsiiyey shaqsiyaad ay ergada haweenka soomaalida ku sheegeen kuwa muteystay in la siiyo shahaasdo sharaf madaama ay ergada haweenka si hagarli ula shaqeeyeen shaqsiyadkaasi ayaa kala ah:-
1-Wasiirka Arimaha Dibada Hon. Kolonzo Misayoka
2-wasiirada shaqada iyo labdhidhiga ee Uganda Hon.Zoe Bukuka Bakoka.
5-Prof.Maxamed Cabdi Maxamed Prof. Gandi.
6-Khaliif Xasan Axmed oo ka socda Novib-Somalia.
xafladasi ayaa soo agaasimey hayadaha Samafal ee kala ah Novib-Somalia iyo Midawga Yurub.
xafladaasi ayaa waxaa lagui soo bandhigay heeso iyo majaajilo ka hadlayey taariikhda Haweenka iyo gudniinka Gabdhaha Soomaaliyeed.